Start up learning of Laravel Framework — MYSTERY ZILLION
Start up learning of Laravel Framework
August 2014 edited August 2014 in Laravel
Laravel Framework စတင်လေ့လာဖို ့ကို ဆွေးနွေးချင်လို ့ပါခင်ဗျ။
ကျွန်တော် လေ့လာထားတာ,ရေးနိုင်တာ PurePHP, CSSပါ။
ပုံမှန် Project တစ်ခု Developလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်း Xamppပေါ်မှာပဲ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
MySQLထဲမှာ Databaseဆောက်, Project Folderတစ်ခုထဲမှာ Pageတွေရေး
အခု Laravel Framework ကို လေ့လာတော့ နားမလည်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
သူ ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကို လူပြိန်းနားလည်မယ့် နည်းနဲ ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်းပြဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပုံမှန်ရေးနေကျ Style ကနေ ဘယ်လို ပြောင်းလဲအလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
August 2014 Moderators
You might need to know three things about before your learning about Laravel.
First, Laravel use Compser, which is similar to Gem in Ruby, npm in Node.js and pip in python. So you basically need to idea of what composer do.
Second, If you are coming from raw php, you might need to read about Design Architecture like Model View Control.
Third (Optional), If you prefer to read Laravel in Burmese, laravelmyanmar will be for you. We also write about trick and tips of laravel in blog category
I really want to write with burmese and I don't have any of unicode keyboard for that moment. Hopefully you can understand my situation.
Thanked by2saturngod K
August 2014 Administrators
@Morris , you can type with zawgyi and press the in the editor. It will convert to Unicode
@lonedevil1‌ , MVC အကြောင်းကို အကြမ်း အနေနဲ့ http://blog.saturngod.net/knowledgebase/mvc ဖတ်လို့ရတယ်။ ရေးထားတာကတော့ တော်တော်လေးတော့ ကြာနေပြီ။ ရေးတုန်းက codeigniter သုံးနေတာဆိုတော့ codeigniter နဲ့ ရှင်းထားတ်။ အခုအချိန်မှာ CodeIgniter သုံးတဲ့လူ တော်တော်နည်းသွားပြီ။
ကျွန်တော် Design Architectureဖြစ်တဲ့ MVCကို အကြမ်းဖျင်း သဘောပေါက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
ရိုးရိုး Project က Pageတွေကိုလည်း Model,View,Controller ပုံစံ အကြမ်းဖျင်းခွဲပြီး ရေးဖူးပါတယ်ခင်ဗျ။
ကျွန်တော် နားမလည်တာက Composer အပိုင်းဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
Composer နဲ့ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေးကို နည်းနည်း ထပ်ဆွေးနွေးပေးနိုင်ဦးမလား မသိဘူးခင်ဗျာ။
Laravel myanmar .com ကို ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ သိပ်သဘောမပေါက်သေးဘူးဖြစ်နေလို ့ခင်ဗျ။
terms တွေက စိမ်းလည်း စိမ်းနေတာပါမယ် ထင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး routes ကနေ Page လွှဲတာ. Data ထည့်တာ အဲ့တာလေးတွေပေါ့။
I.. just simply don't get it. So,... ;(
composer ဆိုတာက package manager ပါ။
ဥပမာ။ node.js မှာဆိုရင် NPM , ruby မှာ ဆိုရင် gem စသည့် package manager ရှိတယ်။ နောက်ပြီး HTML app တွေ အတွက် bower စတာတွေ ရှိပါတယ်။
PHP မှာ ကတော့ composer သုံးတယ်။
Monolog Logger ကို ကျွန်တော်ရဲ့ project မှာ သုံးချင်တယ်။ Package Manager မသုံးပဲ ရိုးရိုး သုံးလို့ရတယ်။
Library တစ်ခုလုံးကို download ချ ။ ပြီးရင် require_onece(' Monolog / Logger.php') ဆိုပြီး ခေါ်။
ဘာ ပြဿနာ ရှိလဲ ဆိုတော့ developer က သူ့ code မှာ bug ရှိတယ်။ bug ပြင်ပြီး update လုပ်လိုက်တယ်။ သူ update လုပ်လိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ မသိဘူး။ သူ့ version အဟောင်းမှာ ရှိတဲ့ bugs fix တွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project မှာ ရှိနေတယ်။
တကယ်လို့ သိခဲ့ရင် manually download ချပြီး file တွေကို replace လုပ်ရတယ်။
library က ဒီ တစ်ခု တည်းမဟုတ်ဘူး။ တခြား အများကြီးလည်း သုံးထားမယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေ manullay စစ်ပြီး manually file replace လုပ်နေရမယ်။
package manager သုံးလိုက်တဲ့ အခါမှာ package ကို update လုပ်တိုင်း version ကို စစ်ပြီး version ပြောင်းသွားရင် update လုပ်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ manually library တွေကို သွားစစ်ပြီး update လုပ်နေစရာမလိုတော့ဘူး။
ဒီလိုပဲ သူများတွေက သူ့ project မှာ တခြား library တွေ သုံးထားတယ်။ ကျွန်တ​ော်က download ချလိုက်တယ်။ library တွေက များတဲ့ အတွက် သူ့ source code ကို အကြာကြီး download ချနေရမယ်။ သူ့ source code မှာ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ library တွေကလည်း version နောက်ကျတာ ဖြစ်ရင် ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
အဲဒီ တော့ package manager သုံးထားရင် သူ့အနေနဲ့ package name တွေ ပေးထားပြီးတော့ share တဲ့ အခါမှာ library တွေ မပါပဲ သူ့ source တွေပဲ share လိုက်ရုံပဲ။ ကျွန်တော်တို့ က သူ့ source ကို download ချပြီး မှ package ကို update လုပ်လိုက်ရုံပဲ။ ၂ ခါ မပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့။
PHP ရဲ့ composer မှာ composer.json ထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ package name တွေ ရေးထားတယ်။ အဲဒါကို update လုပ်လိုက်ရုံပဲ။
package တွေကလည်း dependencies တွေ ရှိတတ်တယ်။ composer က လိုအပ်တဲ့ dependencies တွေကို သူ့ အလိုလို သွင်းထားပါလိမ့်မယ်။
Jeffrey Way ရဲ့
မှာ laravel ကို very beginning ကနေ လေ့လာလို့ရပါတယ်။ composer နဲ့ installation ပြုလုပ်ပုံ၊ MVC ဆိုတာ ဘယ်လို၊ ပြီးရင် laravel ရဲ့ routing တွေ templating တွေအကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Laravel: Code Bright by Dayle Rees
laravel က လေ့လာရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
Composer အကြောင်းနဲ့ Laravel ကို Install လုပ်တဲ့အကြောင်းကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်
Routing အကြောင်းကို မြန်မာလို documentation က ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်
ကိုနိုင်ဝင်းရေးထားတဲ့ Route အကြောင်းကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်
အခြား Laravel နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ Laravel Myanmar မှာဆက်ရေးသွားမှာပါ...
Thank you everyone. I do appreciate all of your answers.